Nhamba dzeRoma kubva 1 kusvika 1000: Chinyorwa, Mushanduri uye Maekisesaizi
Parizvino vanhu vazhinji vanoshandisa iyo system ye Nhamba dzeArabic zvekuve nyore. Kunyangwe mune dzimwe nguva zvaive zvakasiyana. Makore mazhinji apfuura Humambo hweRoma yakatonga nzvimbo huru kwemazana emakore akawanda. Nekugona kwake kukuru akaparadzira huzivi uye ruzivo kwese kwese, achizivisa Nhamba dzeRoma.
Muchirongwa ichi tinovavarira kukudzidzisa iwe iyi manhamba sisitimu, iyo ichiri kushandiswa mune zvimwe zvinhu (semumafirimu: Nyeredzi hondo IV, V, VI), uye zvitsanangure kwauri kuti iwe ugone kuzvidzidza zviri nyore. Chekutanga pane zvese, kana iwe uchitoziva iyo dzidziso uye zvauri kuda kushandisa shanduri, unogona kushandisa iyi kubva apa:
1 Roman Numeri Muturikiri (Shanduri)
2 Ndeapi manhamba echiRoma?
3 Nhamba dzeRoma dzinonyorwa sei?
4 Chinyorwa chemanhamba echiRoma
4.1 kubva 1 kusvika 50
4.2 kubva 1 kusvika 100
4.3 kubva 1 kusvika 500
4.4 kubva 1 kusvika 1000
4.5 kubva 1 000 zvichienda mberi
5 Mitemo yechiRoma
6 Mazuva muhuwandu hweRoma
7 Maitiro ekuisa manhamba echiRoma muIzwi?
Roman Numeri Muturikiri (Shanduri)
Ndeapi manhamba echiRoma?
Manhamba evaRoma haanyanyo shandiswa manhamba nhasi. Ivo vakagadzirwa mavara makuru kumiririra manhamba. Kubatanidzwa kwetsamba idzi kunowedzerwa kana kubviswa kuti zvipe nzira kune imwe nhamba. Tsamba dzese dzakashandiswa ndedzinotevera:
C = zana
D = mazana mashanu
Semuenzaniso, iyo nhamba 1 inomiririrwa ne tsamba ini ", uye iwo maviri achishandisa huwandu hwe 2 «II». Kana izvi zvakaenzana zvanzwisiswa, pazasi isu ticha tsanangura maitiro ekunyora manhamba echiRoma.
Nhamba dzeRoma dzinonyorwa sei?
Kunyora manhamba echiRoma iwe unofanirwa kugona kuwedzera uye kubvisa. Zvimwe zvinhu zvese zviri nyore mitemo yatichakuratidza. Kutanga unofanira kuziva izvozvo panogona kunge pasina anopfuura matatu mavara akaenzana akateedzana.
Kana mavara maviri akaenzana, kana rekutanga rakakura kupfuura rechipiri, Wedzera, zvikasadaro (apo tsamba yekutanga iri pasi pechipiri), vanobviswa. Somuenzaniso:
Kana iwe uchida kushandisa nhamba yakaenzana kana kana yakakura kupfuura zviuru zvina, uchafanirwa kuisa tambo, inonzi vincum, pamusoro pemavara. Izvi zvinoreva kuti nhamba iri kuwedzerwa ne1 000. Semuenzaniso, iyo 4.000 muzviverengero zveRoma inomiririrwa seizvi:
Nhamba yacho 10.000 inomiririrwa seizvi:
Uye pakupedzisira, imwe inogona kuve yakaoma, iyo 50.000 muzviverengero zveRoma yakanyorwa seinotevera:
Munguva yakapfuura, huwandu hwakakura kwazvo hwaisadikanwa, senge mamirioni. Uye vaRoma havana kuita hanya nazvo. Kunyangwe zvakadaro, zvinokwanisika kuzvinyora nekuisa mutsetse pazasi uye pamusoro petsamba. Mupfungwa iyoyo, kana isu taida kureva zviuru zvishanu, taizoshandisa fomati:
Iyo nhamba 5 (V) uye yakawanda yayo, 50 uye 500 (L, D), hazvigone kushandiswa kubvisa. Hazvina kunaka kunyora «VC» kureva iyo nhamba 95.
Fomu chairo nderekuti: XCV.
Chinyorwa chemanhamba echiRoma
Sezvo iwe uine pfungwa yekunyora manhamba echiRoma, zviri nyore kuti iwe uone rwakazara runyorwa neiyo manhamba kubva 1 kusvika 1000, uye imwe nhevedzano yenhamba dzakakwira. Nenzira iyi iwe uchave unojairana navo uye uchakwanisa kuvanzwisisa zviri nani.
kubva 1 kusvika 50
kubva 1 kusvika 500
kubva 1 kusvika 1000
796 Nhoroondo ye DCCXCVI
kubva 1 000 zvichienda mberi
Mumazita apfuura tasvika panhamba chiuru, inomiririrwa naM. Pazasi tinopa dzimwe nhamba dzakakwira dzinogona kukufadza.
Isu tinoisa zvisina kujairika manhamba nekuti isu tinofunga kuti kuverenga iwo ese angave zvisina basa uye hazvina basa. Vacherechedze uye uone chiri chimiro chatinoshandisa kunyora kwavari, uye zvirinani, huya neimwe nzira yekumiririra iyo yakafanana nhamba. Ipapo isu tichazokuudza iwe nei vanogona kungonyorwa kudaro. Ruzivo irworwo runokubatsira zvakanyanya.
Sezvinobvumwa, mashandiro eesvomhu ane manhamba echiRoma anombonyengera, muchokwadi icho chimwe cheicho zvikonzero nei iyi nhamba yekuverenga yakarasa kushandiswa. Nzira yekugadzirisa mashandiro aya inosanganisira yekutevera mamwe matanho, sezvazviri nenhamba dzechiArabic, zvisinei, maitiro nemaverengero evaRoma Yakareba.
Pano tichatsanangura sei wedzera, bvisa, wedzera uye kupatsanura nenhamba dzeroma yekare.
Kuwedzera 2 manhamba eRoma iwe unofanirwa kutevedzera anotevera matanho:
Chinja kubvisa kubvisa muzvikamu zvekuwedzera. Semuenzaniso: kubva XXIX (29) kusvika XXVIIII. Izvo hazvina basa kana tsamba ichidzokororwa kanopfuura katatu.
Concatenate (Joinha) ese ari maviri manhamba. Semuenzaniso: XXIX + XIV = XXVIIII + XIIII = XXVIIIIXIIII (pano tinozviisa pamwechete).
Raira mavara kubva kune akakura kusvika kudiki. Semuenzaniso: XXVIIIIXIIII = XXXVIIIIIIII.
Ndokunge, nyora nemazvo tsamba nekuwedzera kubva kurudyi kuenda kuruboshwe. Semuenzaniso: XXXVVIII.
Dzokorora maitiro achitevedzera mitemo yatatsanangura kusvika yakwana. Semuenzaniso: XXXVVIII → XXXXIII → XLIII.
Kubvisa kuri nyore pane kuwedzera. Kuzviita, tevera anotevera matanho.
Chinja kubvisa kubvisa muzvikamu zvekuwedzera. Semuenzaniso: kubva kuCCXLI (241) kuenda kuCCXXXXI. Izvo hazvina basa kana tsamba ichidzokororwa kanopfuura katatu.
Bvisa mavara akajairika pakati penhamba mbiri idzi. Semuenzaniso: CCXLI - LXXXV = CCXXXXI - LXXXV = CCXI - LV.
Wedzera mabhii etemu yekutanga kusvika mavara etemu yechipiri aonekwa. Semuenzaniso: CCXI - LV = CLLXI - L
Dzokorora nhanho 2 ne3 kusvika temu yechipiri isina chinhu. Semuenzaniso: CLLXI - LV = CLXI - V = CLVVIni - V =
Ndokunge, nyora tsamba nemazvo. Semuenzaniso: CLVI = 156. Muchiitiko ichi zvinoramba zvakafanana nekuti hapana tsamba dzinobvisa.
Kuti uwedzere manhamba evaRoma unofanira kuziva wedzera ivo, uye govanisa uye wedzera nhamba dzeArabic na2. Unofanirwawo kugadzira tafura, uchiisa nhamba yechiRoma kurudyi uye imwe kuruboshwe. Wobva watevera anotevera matanho.
Tichareva "KU" senge nhamba dziri kuruboshwe kare "B" sevaya vari kurudyi.
Govanisa A ne2 uye isa iyo quotient pazasi. Semuenzaniso: 23/2 = 11.
Wedzera B na2 uye isa mhedzisiro pazasi.
Dzokorora nhanho 1 ne2 kusvika pakoramu yekuruboshwe (term A) iri nhamba 1.
Bvisa kubva patafura mitsara yose umo iyo quotient kuruboshwe yakafanana.
Wedzera kumusoro ese manhamba akasara mukoramu yekurudyi (temu B).
Ona muenzaniso wekuti ungawedzera sei maviri manhamba eRoma.
Gumi nepfumbamwe (19)
Iye zvino tinodzima mitsara yese uko muchikamu chekuruboshwe paine nhamba yakatowanda.
Iye zvino isu tinongofanirwa kuwedzera manhamba kurudyi sezvatatoita.
XXXVIII + CLII + CCCIII +MMCCCCXXXII (chinja kubvisa kubvisa mu mari)
XXXVIIICLIICCCIIIIMMCCCCXXXII (isa nhamba pamwechete)
MMCCCCCCCCLXXXXXXVIIIIIIIIIII (zvigadzirise kubva kumusoro kusvika pasi)
MMDCCCLLXVXI (gonesa nekuwedzera kubva kurudyi kuenda kuruboshwe)
MMDCCCCXXVI (kurerutsa nekuwedzera kubva kurudyi kuenda kuruboshwe)
MMCMXXVI (yekupedzisira mhedzisiro: 2926)
Kupatsanurwa muzviverengero zveRoma havana kubudirira, kunze kweizvozvo hapana mitemo inozivikanwa yekuvabvisa.
Chinhu chega chinozivikanwa ndechekuti iwe unofanirwa kubvisa iyo divisor kugovera kusvikira iwe wasvika pane nhamba yakaderera pane iyo disisor. Semuyenzaniso: 10/3 Pano panogovaniswa gumi uye muparadzanisi ari 10.
Izvo zvaunofanirwa kuita kuti uverenge kupatsanurwa muzviverengero zveRoma zvinotevera:
Iyo yasara i1 uye iyo quotient iri 3 (nekuti takabvisa katatu). Saka mhinduro ndeye 3, zvisinei, hachisi chokwadi zvachose, kubvira 3/10 = 3 ...
Iwe unofanirwa kuita izvi zvakafanana netsamba dzeRoma uye iwe unowana mhedzisiro mune iyo nhamba system. Kuti iwe uve akajeka nezve ruzivo, tiri kuzokuratidza zvimwe zvinhu zvaunofanira kufunga nezve idzi nhamba. Tine chokwadi chekuti nenzira iyi uchavanzwisisa zvizere.
Nhamba dzeRoma vane kukosha kwekusarudzwa. Naizvozvo, zvingave zvisiri izvo kuti "VIII. Games Mitambo yeOlympic ». Chinhu chakakodzera ndeche: VIII Mitambo yeOlympic.
Mavara "V, D uye L" haadzokororwi. Kune mamwe mavara anomiririra iwo manhamba, semuenzaniso, pachinzvimbo chekunyora LL, inova zana, tsamba C inoshandiswa.
Nhamba zero (0) haisi mukati memanhamba echiRoma. Kureva nhamba yavakashandisa mazwi nulla, nihil kana kuti tsamba N.
Chiratidzo ndinogona kungobvisa kubva paV naX.
Chiratidzo X chinogona chete kubvisa kubva kuna L naC.
Chiratidzo C chinogona kungobvisa kubva kuna D naM.
Izvo chete zvekunyora mavara ehuwandu hweRoma mu rakadzika kuronga runyorwa rwezvinhu.
Iko kushandiswa kwehuwandu hwechiRoma kushomeka, kunyangwe kudzidza kwavo kuchikosha. Iwe unowanzovaona vakanyorwa mune inotevera kesi:
Mukuteedzana kwapapa, madzimambo, machinda kana madzimambo ane zita rimwechete (Henry VIII wekuEngland).
Kutumidza mazana emakore (XNUMXth century).
Kuverenga mavhoriyamu kana zvitsauko zvebhuku kana bhaisikopo (Chitsauko I).
Kuverenga mhemberero dzinoitwa nguva nenguva (IV Yekuvhima Mitambo).
Kutumidza mazita emadzinza emamwe marudzi (Iyo XVI Qing imba).
Mazuva muhuwandu hweRoma
Kunyora mazuva muzviverengero zveRoma kuri nyore chaizvo. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kupatsanura zuva racho muzvikamu zvidiki-uye nekushandura izvo kuva manhamba evaRoma. Semuenzaniso, kana isu tichida kushandura iro zuva 01-02-2018, kana chii chakafanana, Kukadzi 1 kubva ku2018. Kutanga tinoshandura zuva, 1, anova ini, tobva tashandura mwedzi, 2, unova II, uye pakupedzisira tinoshandura gore, 2018, rinova MMXVIII.
Ipapo isu tinodzokororazve chimwe nechimwe chezvikamu kune yedu yechinyakare fomati: I-II-MMXVIII. Kana iwe uine chero mibvunzo nezve iyi maitiro, iwe unogona kutisiira isu mhinduro panoperera chinyorwa.
Maitiro ekuisa manhamba echiRoma muIzwi?
Vazhinji venyu makabvunza mubvunzo uyu uye isu tichaedza kuupindura nenzira kwayo. Chekutanga pane zvese, kana iwe uchida kunyora 1 muzviverengero zveRoma muIzwi rezwi processor, iwe unongofanirwa kunyora tsamba ini nemusoro. Kubva 1 kusvika 4000 manhamba ese anogona kumiririrwa nemavara atinowanzoshandisa. Kana iwe uchida kunyora yakakura nhamba, sa5000, unofanirwa kushandisa vincum sekutaura kwatamboita, zvatingawana nekutevera nhanho dzinotevera:
Chekutanga pane zvese tinodzvanya pairi Insert -> New equation.
Ipapo isu tinotsvaga yeAccent sarudzo uye sarudza iyo equation imwe bar pamusoro:
Izvo zvatinozove nechimwe chinhu chakadai muGwaro redu reIzwi:
Chekupedzisira, mukati mekwere tinonyora chero chatinoda kuti vinculum ive nayo. Semuenzaniso, yenhamba mazana mashanu nemakumi mashanu yatingave nayo:
Ready! Iwe unotoziva kunyora manhamba echiRoma muIzwi. Kune rimwe divi, kana iwe uchida rondedzero kuti ushandise manhamba echiRoma panzvimbo yenhamba dzakajairika, sarudzo inotevera inoshandiswa:
Zvisinei, kana iwe uine chero mibvunzo iwe unogona kutisiira isu mhinduro pazasi uye isu tichapindura nekukurumidza sezvazvinogona.
Tevere, isu takagadzirira mashoma ekurovedza muviri kuitira kuti iwe ugone kuyedza ruzivo rwako rwemanhamba echiRoma. Unogona kuongorora zvatave kudzidza muchinyorwa zvacho pasina dambudziko, chakakosha ndechekuti iwe chengeta izvo zvekutanga uye zvakakosha 🙂 Rombo rakanaka!
Zvimwe zvitatu soixante ...
Mon père Vicente avhareji-huit ans
Mon ami Vicente an soixante-huit ans
Nhamba ipi inoita soixante-sept?
Deux pamwe trois font ...
kudzidziswa » tsika nemagariro » Nhamba dzeRoma kubva 1 kusvika 1000
4 makomenti pane "manhamba echiRoma kubva 1 kusvika 1000"
Nyamavhuvhu 17, 2018 pa1: 00 pm
Mangwanani akanaka, ndiri, ini ndiri mudzidzisi uye nhasi vechidiki havazive zvachose manhamba echiRoma.Ndinoda kuti munditumire mari inopfuura miriyoni, senge chiuru chemawadhi uye zvimwe iwoyo mubvunzo unogara uchindibvunzwa nevadzidzi. , ndinokutendai zvikuru neruzivo urwu rwakakosha
Mbudzi 10, 2018 pa2: 07 pm
Andrea zvinoreva zita
Chikumi 13, 2019 na8: 51 pm
Nyamavhuvhu 16, 2019 pa11: 33 pm
Ndatenda, zvave zvinondibatsira kuti ndiongorore ruzivo.